Tanàna Rosiana Manapaka ny Solika ho an’ilay Lelafo Mirehitra Mandrakizain’ny Ady Lehibe Faharoa Mba Tsy Hahandro amin’io Ny Eo An-toerana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Oktobra 2016 6:34 GMT
Tanàna Rosiana iray manamorona seranan-tsambo ao avaratry ny Taganrog Bay i Taganrog, eo amina 1.100 kilaometatra atsimon'i Moskou. Ireo tanàna manerana ny Firaisana Sovietika fahiny dia manana ireo lelafo mirehitra mandrakizainy mba ho fanomezam-boninahitra ireo maty tamin'ny nandresena ny Nazis.
Tany am-piandohan'ity herinandro ity, namay ny Gazprom, raha nanomboka nizara ireo sarin'ilay lelafo mirehitra mandrakizay tsy narehitry ny tanàna intsony ny olona tao Taganrog, nampiana ny soratra hoe ”Tsy ireo fàtan'entona fotsiny ihany no nakaton'ny Gazprom, fa ny toerana fahatsiarovana ihany koa.”
Mamaly ao amin'ny Facebook, Vladimir Revenko, tale jeneralin'ny sampan'ny Gazprom eo an-toerana, nanazava fa misy tsangambato dimy amin'ireo no miasa ao Taganrog, fa iray amin'izy ireo ihany raha ny marina ny lelafo mirehitra mandrakizay. Miteny izy fa fanapahankevitry ny orinasa ary avy amin'ny fangatahan'ny manampahefana eo an-toerana, rehefa fotoana fialantsasatra, ohatra, no amelomana ireo tsangambato ireo. ”Izany, dia satria tsy te-hahita olona mitono mofo voasesika saosisy eo amina afo toy izany izahay,” hoy ny nosoratan'i Revenko. ”Tsy misy fandriampahalemana, ary tsy misy fanarahamaso tsy tapaka. Rehefa tsy misy io, indrisy, tsy afaka atao ilay izy.”
Nofafan'i Revenko ilay fanehoankeviny taty aoriana ary naveriny nozaraina indray tsy nisy ilay fanamarihana mikasika ny saosisy, fa ilay lahatsoratra voalohany dia efa ela nipetrahana tao amin'ny serasera mba hisintonana ireo tsikeram-bahoaka fa tsy mahavita ny asany amin'ny fanajana ny endrika famantarana ilay lelanafo mirehitra mandrakizay sy ny vahoaka ao Taganrog ny Gazprom.
“Voninahitra mandrakizay ho an'ny mpinjija-mpanorina lavo tamin'ny ady ho an'ny Tanindrazana.” Sary: Oleg Rudikov
Raha mety ho maso mainty ho an'ny Gazprom ity zava-nitranga ity, nahitana andianà faniratsirana maro tokoa i Rosia tamin'ireo lelafony mirehitra mandrakizay manerana ny firenena. Tamin'ny fiandohan'ny volana Jolay tamin'ity taona ity, nisy lehilahy azo sary nanatono shish kabob teo amin'ny lelafo mirehitra mandrakizay tao St. Petersburg. Rehefa niantso ny polisy ilay vavolombelona mba hitatitra ny zava-niseho, tsy nisy valiny kosa izany.
Tamin'ny volana May, mponina maro tao Kemerovo no tratra nahandro saosisy teo ambonin'ilay lelafo mirehitra mandrakizain'ny tanàna. Taona iray talohan'izay, vondrona tanora iray no tratra nanatono ovy teo amin'ny lelanafo mirehitra mandrakizay tao Tula. Tamin'ny volana Aprily 2014, mpizahatany mamo avy any Siberia no nosamborina noho izy nipipy teo amin'ilay lelafo mirehitra mandrakizay tany Belgorod, ary taorian'izay dia voasazy telo taona an-tranomaizina.
Misy zava-nitranga vitsivitsy mitovy amin'ireo tao anatin'ny taona vitsivitsy lasa izay, izay nahitana ireo olona, na mahandro eo amboniny, na nanamaivanana ny tenany teo amin'ny lelafo mirehitra mandrakizay tany aminà tanàna samy hafa tao Rosia.
Tsy tany Taganrog ihany, anefa, izay nangiazan'ny Gazprom ny fandrehetana ny afo fanomezam-boninahitra ny Ady Lehibe Faharoa, ary noho izany mampidina ny isan'ireo afo fahatsiarovana izay maka fanahy ireo mpitonotono hanina sy mpamany.